मन्त्रि बास्कोटासँगै काठमाडौँ ओर्लिएका गायक प्रमोदले अचम्मित हुदै लेखे यस्तो स्टाटस!! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/मन्त्रि बास्कोटासँगै काठमाडौँ ओर्लिएका गायक प्रमोदले अचम्मित हुदै लेखे यस्तो स्टाटस!!
काठमाडौँ, फागुन ८ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले राजिनामा दिएका छन्। सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेसको खरिदमा ७० करोड कमिसनका बार्गेनिङ गरेको अडियो बाहिरिएसँगै बास्कोटाले राजिनामा दिएका हुन् ।
गायक प्रमोद र मन्त्री बाँस्कोटा विमानबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा एकसाथ बाहिरिएका थिए। तर गायक प्रमोद साधारण व्यक्ति आउने मार्गबाट बाहिरिए भने मन्त्रि बाँस्कोटा भीआईपी मार्गबाट बाहिरिएका थिए । प्रमोद विमानस्थलबाट कोटेश्वर नपुग्दै एकसाथ त्रिभुवन विमानस्थल आइपुगेका मन्त्रि बास्कोटाले राजिनामा दिएको खबर सुनेपछि अचम्मित हुदै स्टाटस लेखेका थिए।
बाँस्कोटाले आफ्ना बारेमा प्रश्न उठेको जनाउँदै नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीद प्रक्रियामा कमिशनका लागि कुराकानी भएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै ट्वीट गरी मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको जानकारी गराएका छन्।
उनले ट्वीटमा भनेका छन्, “मेरो बारेमा प्रश्न उठेकाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएको जानकारी गराउँदछु ।”